Lacagtayda dib ma u heli karaa, Wikipedia? | Martech Zone
Lacagtayda dib ma u heli karaa, Wikipedia?
Khamiis, Janaayo 25, 2007 Talaado, Febraayo 16, 2016 Douglas Karr
Anigu wax weyn kama ihi Wikipedia. Si kastaba ha noqotee, waqtiyadii la soo dhaafay waxaan xoogaa lacag ah ugu deeqay aasaaska waxaanan ku biiriyay waxyaabaha ku jira degelkooda. Waan jeclahay Wikipedia… Waqtiga oo dhan waan istcimaalaa waana ku tixraacaa bartaheyga. Wikipedia ayaa i caawisay sidoo kale - abuurista waxoogaa hits ah oo boggeyga ah iyo Wikipedia waxay hagaajisay darajadayda guud ee bogga iyada oo loo marayo xiriiriyeyaasha igu soo noqda
Marka la eego aragtidan, miyaanay taasi ahayn wax la bixiyo oo la qaato xaalad? Waxaan siiyay Wikipedia lacag iyo waxyaabo. Taas bedelkeeda, waxay i siiyeen hagaajinta mashiinka raadinta iyo hits toos ah.
Hadda Wikipedia is ku daray nofollow dhammaan xiriiriyeyaasha dibedda. Taasi waxay asal ahaan ka saareysaa tixraac aad u muhiim ah barteyda, sidaa darteed shaki kuma jiro inaan waayi doono meelaynta mashiinka raadinta go'aanka awgiis.
Waxaan u maleynayaa inaysan wax i dhibaynin marka laga reebo inaan labadeenaba ka faa'iidaysanay xiriirkeena ganacsi horay. Wikipedia kaliya waxay heshay waa qiimeynta mashiinka raadinta ee cajiibka ah maxaa yeelay:
Dadku waxay ku darsadeen waxyaabo
Dadka ku xiran waxyaabahaas
Marka, waa tan $ 10 su'aal. Dhamaanteen dib ma ula soo noqon karnaa lacagteenii, Wikipedia? Waxaad u badashay xiriirkii ganacsi dhamaan kuwa wax ku darsaday adigoon marka hore weydiinin. Waxaa laga yaabaa inaadan u qalmin, mar dambe.
Ku akhristayaasha my post dhowr maalmood ka hor, waad ku farxi doontaa inaad ogaato inaad AAD hagaajin karto darajooyinkaaga adigoo faallo ka bixinaya xiriiriye dib ugu noqonaya boggaaga. Naafo ayaan ahay nofollow on my blog. Marka faallo ka bixi! Bixi xoogaa nuxur ah oo faa'iido leh!
Tags: nofollowxiriirinta nofollowrel = nofollowwikipedia
Ma aragtay Ololaha Andy Beal si dadka looga dhaadhiciyo "nofollow" xiriiriyeyaashooda Wikipedia? Waxay umuuqataa kaliya cadaalad.
Ma fahmin caqliga ka dambeeya tallaabadani ugu dambeysay ee Wikipedia. Qodobka dhan ee xiriidhada bogagga Wikipedia ayaa ah in la tixraaco bogagga maqaallada ay ka soo baxaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Haddii bogagga tixraaca ah aan lagu kalsoonaan karin inay yeeshaan xiriir caadi ah, maxaa loogu aammini karaa inay yihiin tixraacyo maqaal ah? Waan fahmi karaa ku darista "nofollow" xiriiriyeyaasha cusub illaa ay ka marayaan nooc ka mid ah dib u eegista, laakiin ku darista si joogto ah dhammaan xiriiriyeyaasha baxaya waxay umuuqataa inay khalad tahay.
Xitaa waxaan dareemay isku mid! wikipedia ayaa na niyad jabisay!
Dhamaan arinta nofollow waa mid aad u xiiso badan. Adiga oo aan lahayn astaamaha 'nofollow' waxaad dhiirrigelinaysaa faallooyinka, laakiin sidoo kale waxaad dhiirrigelineysaa been-abuurka (oo samee spam-ka wax-ku-oolka ah). Waxaan u arkay Akismet inuu yahay mid wax ku ool ah oo aan ku raacsanahay waxaad sameyneyso in kastoo ...
Wixii Wikipedia ah - kaliya inaan u ciyaaro u doodaha shaydaanka - ma hubo in qof kastaa u arko inuu yahay xiriir bixin / qaadasho, marka loo eego xagga dhaqaalaha. Haa, xog isdhaafsi, laakiin ka sameynta adeeg bilaash ah sida coud-ka ayaa hubaal bulshada ka dhex dhalinaya buuq. Haddii aad kudareyneyso nuxur wanaagsan iyo xiriiriyeyaal laxiriira, waa inay fiicnaataa, laakiin imisa spamers ah ayaa ka hor istaagay Wikipedia oo kudaray astaamaha nofollow? Intaas waxaa sii dheer, lacagta aad ku tabarucday sida caadiga ah waa inaad ku taageerto goobta aad u isticmaashay macluumaadka, ma ahan dib u celin; )
Waxaad keensatay dhibic wanaagsan, laakiin ma garanayo waxa loogu talagalay statistikada udhaxeysa tabarucayaasha iyo milkiilayaasha boggaga xiriirka la leh wikipedia. Waxaan u maleynayaa inay hooseyso, laakiin wali waa dhibic fiican, laakiin maahan mid ay daryeelayaan - maadaama ujeedka guud ee go'aankan cusub uu ahaa in laga takhaluso is-dhiirrigelinta (waxaan u maleynayaa inaad ku dartay xiriiriye u gaar ah wikipedia?)
Waxaad ugu deeqday hay'ad aan macaash doon ahayn, adeeg kama aadan bixin.
Su’aashu runtii waa maxay maxaad ugu deeqday Wikipedia? Ma waxay ahayd inay siiso backlinks balooggaaga mise waxay ahayd inay ka caawiso dhismaha encyclopedia? Haddii aad ka doodi lahayd in deeqdaada la soo celiyo, Wikipedia ayaa ka doodi karta tan dambe. Iyagu waajib kuma aha inay ku caawiyaan qiimeynta mashiinkaaga raadinta, in kasta oo had iyo jeer ay ahayd gunno fiican.
Waa wax laga xumaado in ku xadgudubka nidaamka uu horseeday in la dabaqo nofollow, laakiin kama dhimayso hadafka Wikipedia gabi ahaanba.
Marka hore, waad ku mahadsan tahay ka saarista nofollow-ka bartaada. Anigana sidaas oo kale ayaan ku sameeyay tayda.
Ku darista nofollow ee Wikipedia, ma xallinayaan dhibaatada laakiin waa calaamadaha oo keliya.
Jan 26, 2007 saacadu markay ahayd 1:01 PM
Waxaad soo qaadaysaa su’aal xiiso badan. Waxaan la yaabanahay haddii Wikipedia ay si ula kac ah u dooratay inay hirgeliso shaqadan ka dib markay heleen deeqaha. Waxaan filayaa inay lacagtii qaateen oo ay carareen.
Feb 2, 2007 markay ahayd 2:08 PM
Dib u soo celinta wikipedia.
Looma Raadin Plugin
Macaamiil Badan Iibin Badan
May 27, 2007 at 4: 31 PM
Waxaan dareemayaa in xiriiriyeyaasha nofollow ay aakhirka (waa laga yaabaa inay horeyba u sameyn lahaayeen) ay wax ku biirin doonaan darajada mashiinkaaga raadinta.
Kaliya ka feker waxa xiriiriye nofollow ah: Waa xiriirka ugu xor la'aanta, sumacad-la'aanta iyo PR-hunguriga ee shabakadda. Muxuu mashiinka raadinta ee maskaxdooda saxda ahi iska indho tirayaan macluumaadkan dheeriga ah ee ku saabsan websaydhka muhiimadiisa.
Waan hubaa in Google ay leedahay darajo qarsoodi ah oo hoose oo degello ah 🙂
May 29, 2007 at 11: 09 AM
Waxaa la ii sheegay Wikipedia sidoo kale kuma darin wax raaci ah faallooyinka ku soo celinta faallooyinka
Isbedelka aan la raacin waxay ahayd talaabo aad u marin habaabin ah oo loogu talagalay wiki si loo qaado oo aan u hubiyo inay ku dhibaatoodeen marka la eego abuurista waxyaabaha ka dhashay natiijada. Dhinaca kale dhammaantiis ma xuma, wali waxaad ka heli kartaa taraafikada xiriiriyeyaashaada.
Waxaan ugu booday ciyaarta baloogga si cadaalad ah dhawaanahan, markii wikipedia ay mar horeba hirgalisay sheyga nofollow, sidaa darteed waan u xiisay doontii Waa inaan dhahaa inkasta oo, inaan ku xirmay maqaal ku saabsan mid ka mid ah baloogyadayda oo aan ka soo qaatay bogga wikipedia waana wali mid wax ku soo kordhiya taraafikada.
Febraayo 3, 2008 saacadu markay tahay 4: 11 AM
OK Waxaan isku dayayaa inaan hoos u dhigo fikradan raacsan / diidmada ah, haddana waan helay! Ma waxaad dhahdaa waxaad u gudbisay maqaal Wiki ah oo leh xiriiriyehaaga, google ma raaci doono, laakiin aadanaha ayaa raaci doona? Dareen dabiici ah, taasi macno ayey samaynaysaa, taas oo ah inaan doonayno in dadku qiimeeyo! Waxay qiimeynayaan aaladaha, waxayna sare u qaadayaan qiimaha aadanaha!
Haddii aad heshiis kula tahay wikipedia markaa waa inaad hubaal ka dhigtaa lacagtaada.